गरिमाका तीन शाखा झापामा « purwanchal National Daily
गरिमाका तीन शाखा झापामा
झापा, जेठ । गरिमा विकास वैंक लिमिटेडले एकैदिन झापाका तीन स्थानमा शाखा विस्तार गरेको छ । वैंकले ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सहज रुपमा वैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले झापाका तीन स्थानमा शाखा विस्तार गरेको हो । बिर्तामोडसहित वुधवारे र बनियानीमा एकैसाथ वैंकले शाखा विस्तार गरेको हो ।
शाखाको उद्घाटन वैंकका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशकको उपस्थितिमा भएको थियो । बिर्तामोडमा स्थापित वैंकको ५२ औं शाखाको उद्घाटन बिर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवकुमार शिवाकोटीले गरेका थिए । शाखाको उद्घाटन गर्दै नगरप्रमुख शिवाकोटीले वैंकलाई कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सुझाव दिए ।
वैंकको शाखा उद्घाटन समारोहमा विर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, एक्सल वैंकका कार्यकारी निर्देशक दिनेशकुमार पोखरेल, वैंकका सञ्चालन समिति सदस्य डा. आनन्द श्रेष्ठलगायतले बोलेका थिए । वंैकका कार्यकारी प्रमुख गोविन्दप्रसाद ढकालले वैंकको गतिविधिका वारेका प्रकाश पार्दै स्वागत गरेका थिए ।
त्यस अवसरमा पूर्व सांसद सुधिरकुमार शिवाकोटी, मनकुमार गौतम लगायतको आतिथ्य थियो । यस अधि वैंकले सर्वोच्च सम्पत्ति सुखी दम्पति भन्ने नाराका साथ गरिमा दम्पति बचत खाता सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेश नं. १ अन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न स्थानमा स्थापित ८ वटा शाखा कार्यालयको औपचारिक समुद्घाटनको पूर्वसन्ध्यामा बैंकले ९ प्रतिशत व्याजदरको नयाँ खाता सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
मेची पुलबाट गरिमा विकास बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले उक्त खाताको शुरुवात गरेका हुन् । नयाँ खातामा उपलब्ध निःशुल्क सेवाबाट बैंकमा खाता खोल्नेहरु लाभान्वित हुने बैंकका अध्यक्ष बरालको भनाइ छ । बैंकमा उक्त खाता खोल्ने ग्राहकहरुले बार्षिक ९ प्रतिशत व्याज प्राप्त गर्नुका साथै एटीएम कार्ड, मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा, सि–आश्वा सुविधा र एवीवीएस सुविधा समेत निःशुल्क रुपमा प्राप्त गर्नेछन् ।
उता नेपालकै होचो स्थान दक्षिणी झापाको कचनकवलमा गरिमा विकास बैक लिमिटेडले आफ्नो ५५औं शाखाको उद्घाटन गरेको थियो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष अञ्जार आलमले रिवन काटेर बैंकको उद्घाटन गरेका थिए । कचनकवल गाउँबासीले बंैक सेवासुविधा लिन अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गर्दै बैकको शाखा कार्यालय विस्तार गरिएको जनरल मेनेजर माधवप्रसाद उपाध्यायले बताए । गरिमा विकास बैकका सञ्चालक सदस्य डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा गाउँपालिका अध्यक्ष आलमको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा गाउँपालिका उपाध्यक्ष निमसरी राजवंशी, वडाध्यक्ष कुलप्रसाद कार्की, बजार व्यवस्थापन समितिका संयोजक रवि ओझा, समाजसेवी विश्वनाथ श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमको सञ्चालन बैंकका सञ्चालक अनुपा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।
त्यसैगरी सोही कार्यक्रमको अवसरमा मेची आमाको सम्झनाका उनका छोराद्वयले लक्ष्मी मावि बनियानीलाई एक थान कम्प्युटर सेट र प्रिन्टर प्रदान गरेका छन् । विश्वनाथ श्रेष्ठ, उनकी श्रीमती सावित्री श्रेष्ठ र डा. आनन्द श्रेष्ठले विद्यालयका अध्यक्ष तुलाराम अधिकारीलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।